About Poltava - Xafiiska Admission of Ukraine Medical & ilkaha Academy
The dhacdooyinka geesinimada ah ee dagaalka Poltava waxaa derdertay naqshadaha ee magaalada. Kaasi Yeel taariikhi ah waa xarunta magaalada Poltava.
socotada An maqleen hubaal arki doontaa in Round Square galidoonaan la taallo ee ka nasahan yahay nuqul suubban ee Palace Square la column Alexandrine of Monferrana ee Saint Petersburg.
Si kastaba ha ahaatee, halkii ka mid ah wadada Petersburg sugeysayna agagaarka mashearulxaraam, in Poltava jiro a
park yaabka badan oo wuu noogu badan la Ereyada.
laakiin, si kastaba, aadan qaldo. Indeed, galidoonaan this dunida-yaqaan gaar ah loo dhisay oo ay injineero fiican sida “yar Petersburg” oo lagu sharfayo 100 guuradii dagaalka Poltava. Taariikhyahanadu waxay ku caddayn in u dhow meesha, halkaas oo Taalladaas taribuunka, in 1709 kulanka Peter ayaan kula daafacyada of Poltava ka dhacay.
Prince Alexey Kurakin, The taliyaha guud ee Malorossiya First, noqday bilaabaha ee dhismaha taallo ka Nasahanyahay. Later, by si gooyo Nikolay II, park qurux badan la aasaasay agagaarka mashearulxaraam, oo koray gelin park gaar Korpusnyi, kaas oo hadda waa meel jecel hartay muwaadiniinta Poltava iyo guests.
Laga soo bilaabo xarunta park, meesha taallo ee munaarado ka Nasahanyahay oo ka sarreeya wanaag, ilaha ballaaran park radially kala faafa oo si fasiix ah u gudbin galay jidadka.
Wixii qarniyo badan oo jiritaankeeda, Poltava ayaa kaalin badan in Ukraine iyo World khasnadda farshaxanka. shaqada Life iyo abuurka ah gabayayaashiinnu badan dunida-yaqaan, Ranjiilayaasha, composers, saynisyahano yihiin si adag u xidh xidhan magaaladan la. magaalada Tani waxa ay ahayd dhashay ah dad badan oo tayo leh, fikradaha,
mashaariic, dhacdooyinka, xaqiijinta of taas oo saamaysay horumarinta taariikhda Ukraine iyo World of
XIX – qarniyo XX.
xariif Creative ah muwaadin Poltava Ivan Kotlyarevskyi siiyey Ukraine luqadda suugaanta qaranka iyo
curin muuqaalka kore ee suugaanta cusub Ukraine.
In Ukraine Athens, sida ay magacaabay Poltava waayahaas, bartay iyo sameeyay xariif hal abuur leh shaqsiyad mustaqbalka fiican sida ay sida xisaab Myhailo Ostrogradskyi, qorayaasha Leonid Glibov, Myhailo Starytskyi iyo Mykola Hohol, cilmiga iyo tirada dadweynaha Mykola Dragomanov.
Halkan helay degeen iyo waxgaradka caan ah sida soo shaqeeyay Panas Myrnyi, Ivan Nechuy-Levytskyi, volodymyr Korolenko, Volodymyr Vernadskyi, Mykola Vavilov iyo Mykola Sklifosovskyi, Mark Kropyvnytskyi, Mykola Lysenko iyo kuwo kale oo badan.
muwaadiniinta Daryeelidda of Poltava sii ay xasuusta fiican falay oo fikrado ka mid ah dad aan caadi ahayn u fiican jiilalka soo socda. In Poltava waxaa jira wax badan oo ka mid ah matxafyada Nagi tirokoobyada caan ah suugaanta iyo daawo: I. estate dalka Kotlyarevkyi, I. museum Kotlyarevkyi suugaanta-xusuus; Volodymyr Korolenko museum xusuus; Heat Myrnyi museum xusuus; M. museum xusuus Sklifosofskyi iwm.
wadanka kastaa wuxuu xabbad luul ah oo ay cunnada qaran taas oo ah qayb ka mid muhiim ah oo cunnada adduunka.
Japan, tusaale ahaan, ayaa gacan ka cunnada adduunka ay sushi saxan kalluunka caan, Italy - pizza iyo makarooni,
Russia - maraq kaabash, Shiinaha - moofo bariis, Ukraine - borsch, varenyky iyo, Dabcan, galushkas Poltava.
Mid ka mid ah dhinacyada, mahad oo Poltava la og yahay oo dhan Ukraine iyo sidoo kale in CIS, Sida runta ah waa masterpiece Poltava of art, Kuliyadda – galushkas Poltava.
galushkas Poltava jidka diyaarinta by eg bur iyo varenyky dunida-yaqaan, inkasta oo kala duwan badan ka 'asxaabteena bur'.
In Poltava ka badan toban nooc oo galushkas ay diyaar u yihiin: galushkas ka doofaarka, galushkas la beerka,
galushkas la cracklings iwm.
Oo weliba, in Poltava ka taagtay in ay Poltava Galushka ayaa qarka u saaran, taas oo astaan ​​filnaanshaha qoyska iyo barwaaqo, kaas oo la soo bandhigay la baaquli weyn oo leh 12 gudaha galushkas iyo malqacad ku taallo gaar ah.
About muwaadiniinta Poltava
muwaadiniinta Poltava ayaa had iyo jeer waxay caan ku tahay soo dhawayntooda. "Waxaan ku faraxsan nahay, kuwaas oo iyadoo in aan ', sheeg hostesses in martidooda marka gelinaya dhan suxuunta ay delicious on miiska.
The galushkas ugu delicious Poltava ayaa la siiyaa guests, erayada ugu daacad ah u sheegay iyaga, gabayadii ugu nunu ayaa sidoo kale lagaga gabyi iyaga.
'Oo dhammu ha tago oo siman oo aad iyo nolosha!..', khadadka kuwa ugu caansan ee songs dalkan.
Haddii aad rabtid inaad sidoo iyaga maqli waayo - waxa noo yimid oo aad marna ka xumaan doonaan!